NJEHIE NA-EFU MSVCP110.DLL. ESI EDOZI - DLL - 2019
Dozie nsogbu na ụlọ akwụkwọ msvcp110.dll
Yandex bụ nnukwu ọnụ ụzọ nke ọtụtụ nde mmadụ na-eleta kwa ụbọchị. Ndị mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ na-elekọta ndị ọrụ nke akụ ha, na-ekwe ka onye ọ bụla n'ime ha hazie usoro mmalite ya iji gboo mkpa ya.
Anyị na-ahazi wijetị na Yandex
N'ụzọ dị mwute, a kwụsịtụrụ ọrụ nke ịgbakwunye na ịmepụta wijetị ruo mgbe ebighị ebi, ma isi agwaetiti ndị ahụ dị mma maka mgbanwe. Nke mbụ, anyị ga-atụle ịtọ ntọala peeji nke.
Iji dezie akụkụ nke ngwa ndị egosipụtara mgbe ị na-emepe saịtị ahụ, na aka nri aka nri na-esote data data gị, pịa bọtịnụ "Mbido". Na menu na-egosi, họrọ "Hazie Yandex".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emelite ibe ahụ, ma hichapụ ma gosipụta akara ngosi ntọala na-esote akụkọ ozi na mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na ịjughị afọ na ọnọdụ nke nkanka ahụ, enwere ike itinye ha na mpaghara ụfọdụ, gosipụtara site na akara aka. Iji mee nke a, megharịa òké ahụ na wijetị ịchọrọ ịkwaga. Mgbe pointer gbanwere obe na akụ na-atụ aka n'akụkụ dị iche iche, jide bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe ma dọrọ na kọlụm ka o tinye ebe ọzọ.
Nakwa ebe a ọ ga-ekwe omume wepu ọnọdụ ndị na-adịghị amasị gị. Pịa na akara akara iji nweta wijetị site na mmalite peeji nke.
Ugbu a, ka anyị gaa n'ihu ịtọ ụfọdụ wijetị. Iji mepee oghere na ọnụọgụ abụọ ahụ, pịa akara ngosi gọọmentị dị nso na ogidi ụfọdụ.
Wijetị a na-egosiputa ndepụta ozi, nke e kewara n'ime edemede. Ná mmalite, ọ na-egosiputa ngwaọrụ na isiokwu niile si na ndepụta ahụ, ma ka na-enye ohere ịnweta nhọrọ ha. Iji dezie, pịa akara ntọala na window windo na-abụghị akara "Rubric mmasị" mepee ndepụta nke isiokwu akụkọ. Họrọ ọnọdụ ị nwere mmasị ma pịa "Chekwa". Mgbe nke ahụ gasịrị, isi peeji nke ga-enye ozi dị mkpa site na ngalaba ahọrọ.
Ihe niile dị mfe ebe a - banye n'ọhịa pụrụ iche aha nhazi, ihu igwe nke ịchọrọ ịma, ma pịa bọtịnụ "Chekwa".
E lere ya anya
Ngwaọrụ a na-egosi arịrịọ onye ọrụ maka ọrụ ị họrọ. Gaa na "Ntọala" ma họrọ akụ na-amasị gị, wee pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa".
A na-ahazi usoro ihe omume ahụ n'otu ụzọ ahụ dịka ndị gara aga. Gaa na ọnụọgụ abụọ ma họrọ akọrọ ị chọrọ. N'okpuru ịhọrọ nọmba egosipụta na ibe ahụ, iji dozie ya, pịa "Chekwa".
Iji mee mgbanwe niile, na aka nri ala nke ihuenyo ahụ, jiri igodo ahụ pịa bọtịnụ ọzọ "Chekwa".
Iji weghachite ntọala ntọala na ala mbụ ha, pịa "Tọgharia Ntọala"wee kwekọrịta na bọtịnụ ahụ "Ee".
Ya mere, site na ịhazi Yandex mmalite peeji nke maka mkpa gị na ọdịmma gị, ị ga-echekwa oge n'ọdịnihu ịchọ ihe dị iche iche. Ngwa wijetị ga-enye ya ozugbo mgbe ịga leta.
https://termotools.com ig.termotools.com © Dll 2019